‘ठगी र झुट हाम्रा लागि शब्दकोशमा नै छैन,’ प्रत्येकले व्यवसाय गरौं रोजगारीको समस्या नै हुँदैन : युवा व्यवसायी अग्रवाल « Kathmandu Television HD
विराटनगरको रङ्गेली, धेरै व्यापारीहरूको कर्म थलो । यसै रंगेलीका बासिन्दा शिवम अग्रवाल । तीन पुस्ताको लगातार मिहेनतका कारण अहिले नेपालमा स्थापित व्यापारी घराना । बाग्मती कमर्सीयल प्राली, बाग्मती ग्यास सप्लायर्स र फोलीडर्म हेल्थ केयर प्राली तीन वटै सफल संस्था । शिवमको जिम्मेवारी कमर्सीयल प्राली र बाग्मती ग्यासको कार्यकारी प्रमुख । यसैगरी, हेल्थ केयरको निर्देशक ।
बच्चाबाटै व्यापारको चासो र चिन्ता राख्ने शिवमको व्यापारका बारेमा प्रस्ट धारणा छ । पहिलो पारदर्शिता, दोस्रो समर्पण र तेस्रो धैर्य । बाबु महेश अग्रवालबाट शिवमले धेरै सिके । बुबा मात्र होइन उद्योगी व्यापारी महेश अग्रवाल शिवमको गुरु पनि हुन् । बुबावाट सिकेका यी धेरै कुरा मध्ये उनलाई एउटा कुराको याद अझै छ । “बाबु ठगी नगर्नु ।” हो, यही शब्दको मनन शिवमको जिन्दगीको मुख्य पाटो बन्यो । शिवम कार्यालय जानुअघि भ्याएसम्म विहान बुबा महेशसँग व्यवसायिक छलफल गर्छन् । उनको यो दैनिकी हो ।
उनका तीन दाजु भाइ, उनका दाजु डा . प्रमोद अग्रवाल छाला रोग विशेषज्ञ । बालुवाटारमा रहेको उनीहरूकै हेल्थ केयर प्रालीका प्रमुख । भाइ कपिल अग्रवाल युवा वैज्ञानिक, दिल्लीको प्रख्यात अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत छन् । कपिल माइक्रोसफ्टमा आबद्ध छन्। दाजु भाइको सङ्गम यस्तो भयो की तीनै जना आफू लागेको क्षेत्रमा एक से एक ।
नेपाली समाजमा मारवाडी समुदाय प्रतिको एउटा धारणा छ र जिज्ञासा पनि । व्यापारमा त्यत्ति धेरै सफलता किन ? व्यापार व्यवसायीमा मारवाडी समुदायको सफलताप्रति धेरै लोभिन्छन पनि । मारवाडी समुदायप्रति आम व्यक्तिको चासो हो यो । यसको कारणमा उनी शिवम प्रस्ट छन्, ‘पारदर्शिता र इमान्दारीता। हामीले भने पछि यो सकियो । एक पटक मुखबाट निस्के पछि निस्कियो । यो हाम्रो मान्यता हो । ’ म यो मान्यतामा प्रतिवद्ध छु ।
२५ वर्ष भयो उनको व्यापारिक कम्पनीको सुरुवात भएको । यस २५ वर्षमा उनी सन्तुष्ट पनि छन् । धेरै हदसम्म । तर, गर्न बाँकी धेरै छ, यो औद्योगिक घरानाका लागि । हो, यसैका लागि थप नयाँ योजना बनाउन उनी शिवम तल्लीन छन् । उनका उत्पादनले नेपाली बजार पाए । उनका व्यापारिक उत्पादन विदेशमा पनि पुगे । तर, यो नै अन्तिम होइन भन्नेमा उनी प्रस्ट छन् । आफ्नो व्यापारलाई अझै अघि बढाउनमा उनी निकै सक्रिय छन् । कर्मचारीसँग मित्रवत् व्यवहार उनको स्वभाव बनिसक्यो । उनी आफू मातहतकै टिममा रहेर नयाँ योजना बनाउने सोचमा पनि व्यस्त छन् ।
जीवनका सफलता र सन्तुष्टिका आफ्नै परिभाषा हुने गर्छन् । यी २८ वर्षीय युवकका आफ्नै परिभाषा छन् । काममा समर्पण र यसले दिने सही परिणाम नै सन्तुष्टिका मुख्य कारक हुन् । अनि उनको व्याख्यामा असफलता भनेको हेर्ने दृष्टिकोण मात्र हो । ‘ कुनै पनि काम गर्दा सुरुमा केही समय घाटा हुन सक्छ ।
त्यसमा कदापी आत्तिनु हुँदैन, त्यो स्वभाविक हो । या केही समय उपलब्धि नहुन सक्छ । यो भनेकै सिक्नका लागि गरिएको लगानी मान्दा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘ हामी स्कुल या कलेज जान्छौ । सुरुका केही दिनमा केही पाउँदैनौ । यसलाई घाटा मान्नु त भएन । यहाँबाट सिकेर नै जिन्दगी अघि बढाउने हो ।’
श्रीमती शिवानी अग्रवालको पनि उनलाई निकै सहयोग छ । उनको कामको पहिलो जर्ज शिवानी नै हो । उनी हरेक स्टेपको सल्लाह शिवानीसँग लिने गर्छन् । त्यसले शिवमलाई दरिलो विश्वास दिन्छ रे ।
ग्यास प्रोडक्सन र हार्डवेयरका सामान लगायत उनका मुख्य उत्पादन हुन् । नेपालमै विदेशबाट सामग्री ल्याएर सामग्री निर्माण गरिन्छ । त्यसो त बाग्मती कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा बाग्मतीका उत्पादन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् पनि ।
उनका मातहतमा प्रत्यक्ष १०० जति तथा अप्रत्यक्ष ५० जना कर्मचारी छन् । यति सानो उमेर अनि उति ठुलो जिम्मेवारी । २८ वर्षे युवकको मातहतमा ६० वर्षका बुबा सरहका कर्मचारी छन् । करोडौ रुपैयाँको कारोवार गर्छन् । कार्यालयभित्र पारिवारिक वातावरण छ । कामको बोझ छैन ।
व्यवसायी र कर्मचारी सबैलाई केही नयाँ गर्ने जोस र जाँगर छ । यसैको जगमा सबैले निरन्तर मिहेनत गरिरहेका छन् । उनकै एक कर्मचारीले राखेको प्रस्ताव अनुसार साताको एक दिन कुनै कुनै उत्पादनको बारे व्यापक छलफल हुन्छ । उनका नजरमा कमदार कारिन्दा होइनन्, सहकर्मी हुन् । प्रत्येक मानिससँग एउटा न एउटा आइडी हुन्छ, हो, त्यो क्यास गर्न सक्नुपर्छ । मात्र यही यो मेरो व्यवसायमा फरकता । कामको स्वमुल्याकन हरेक दिन गरर्यो भने, सही बाटोमा जान खासै उल्झन हुँदैन् । युवा व्यवसायीलाई शिवमको व्यवसायीक टिप्स ।
अबको दुनियाँ ‘ हार्ड वर्क’ भन्दा बढी ‘ स्मार्ट वर्क’ को हो । मिहिनेत गर्दा कम मिहिनेतमा पनि तरिका मिलाएर गर्दा राम्रो परिणाम दिन सक्छ । स्मार्टसँग काम गर्ने उनका नयाँ सोच छन् । जुन सोच नेपाली समाजका लागि राम्रै उपलब्धि हुन सक्छन् । मानिस आफै समाजका सबैभन्दा ठुला सम्पत्ति हुन् । यस कारण अलि नेपालले भोगेको ब्रेन ड्रेनको समस्या खराब हो भन्ने उनको ठहर छ । यसका लागि ठुलो लगानी र उद्योगको विकास नै प्रमुख हो भन्नेमा उनी पूर्ण सहमत छन् ।
राज्यको नीतिमा धेरै व्यवसायीहरू असहमत छन् । मुल कुरा कर नीतिमै । ‘एउटै कामको भिन्ना भिन्नै ठाउँमा करको झन्झट किन ? यो उनको असन्तुष्टि नै हो । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै नेपाली असन्तुष्टि छन् । तर, उनीमा कर्मचारीतन्त्र प्रति कुनै गुनासो छैन् । उद्योग मैत्री नीति हुनुपर्छ यस्ता समस्या आफै सुल्झिन्छ, शिवमको वुझाई । कर तिर्न एकद्धार प्रणाली सवै भन्दा फलदायी हो । कर तिर्दा पनि सन्तुष्टि त होस । झन्झटरहित व्यवसाय आजको समयको माग भइसक्यो । त्यसप्रति राज्यले वुझनु पर्छ, शिवमको आग्रह ।
सङ्गीत, खेल र साहित्यको ‘ एडिक’ नभएको मान्छे नराम्रो एडिक्सनम पर्ने सम्भावना रहन्छ नै । यस कारण उनी सङ्गीतका सामान्य ‘ एडिक’ हुन । सन् १९७० या ८० तिरका मेलोडीयस भारतीय सङ्गीतका उनी पारखी । किशोर कुमार र जगजीत सिंह शैली उनले सुन्ने गरेको सङ्गीत । खेलमा क्रिकेट र लन टेनिस उनका चासोका विषय । उनी आस्तिक समेत हुन् ।
विहान पुजापाठ उनको अर्को दैनिकी पनि हो । कार्यालय समयमा पुग्यो भने उनी आफनो कार्यालयमा पुजा गरिरहेका भेटिन्छन पनि । उनी ध्यान गर्न पनि रुचाउँछन । तर, शिवमलाई कहिले काही समयले समस्या दिन्छ । यो उमेरमा कति घराना परिवारका सदस्य बिग्रिएको पनि प्रशस्तै देखिएका छन् । कुलतमा समेत फसेका छन् ।
त्यही कारणले घरपरिवार तहसनहस समेत भएका छन् । यसवारे शिवमको भनाई अलि फरक छ, संस्कार नै ठुलो कुरा हो । सानैदेखि राम्रो संस्कार सिकाइयो भने यस्ता समस्या कुनै पनि परिवारमा आउँदैन । हामी पनि जान्छौ ल्कव रेष्टुरेन्ट, यो उमेरमा रहर कसलाई हुँदैन र, तर लत केही को बनाउनु हुँदैन, लत त मात्र आआफनो पेशाको बनाउने हो । नयाँ नयाँ क्रिएशन खोज्ने हो ।
मारवाडी समुदायका व्यवसायी खुल्दैन, आफनो समुदाय भन्दा बाहिर आउँदैन भन्नेका लागि शिवम उदाहरण हुन् । उनी सवैसँग मिल्छन र खुलेर कुरा गर्नछन् । शिवम भन्छन, समय कहाँ पुगी सक्यो कन्सेप्ट चेन्ज भइसक्यो । कम्पिटिसनको समय हो, एक अर्कासगँ मिल्नै पर्छ । होइन, नयाँ पुस्ता विल्कुल फरक छ । त्यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, होइन र ? मेरो मारवाडी र अन्य समुदायका साथीभाई बराबरी जस्तै छन् ।
शिवम विदेशीको युवापुस्ताका वारेमा अर्कै धारणा राख्छन, विदेश जानु पर्छ, तर, अध्ययन गरिसकेपछि काम सिकिसकेपछि स्वदेश फर्किनै पर्छ । आज विकसित देशका नागरिकले पनि त्यही गरेका हुन् । आफनो देश बने पो भोलीका हाम्रा पुस्ताले सुख पाउँछन् । विदेशमै भासिँनु भनेको त्यो गलत कदम हो । प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेशा मात्र गरौं त वेरोजगारीको समस्या नै हल हुन्छ ।
त्यसो त हरेक क्षेत्रको सामान्य जानकारी राख्नु पर्छ भन्ने उनको मान्यता हो । राख्ने पनि गरेका छन् । राजनीतिप्रति पनि शिवमलाई गहिरो चासो छ । देशका हरेक घट्नाक्रममा उनी अपडेट हुन्छ । मुलनीति ठिक भएमात्रै अर्थनीति सही हुनेको उनको वुझाइ छ । उनी भन्छन्, दुई तिहाइको सरकार छ, अब संवृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई मुर्तरुप दिन उद्योग मैत्री नीतिको खाँचो छ । उद्योग व्यवसाय फस्टाए मात्रै हाम्रो मुलुकको वेरोजगारी समस्या हल हुन्छ । दैनिक सयौ युवा विदेशिनु पदैन्, उनी भन्छन् ।
दश वटा उद्योगी थपिए दश हजारले रोजगारी पाउँछन् । त्यसैले होला, उनी केही विदेशी कम्पनी नेपाल ल्याउने काममा लागिरहेका छन् । विल्कुलै नयाँ उद्योग नेपाल ल्याउने प्रयासमा छन । यो नयाँ उद्योगका वारेमा उनले भने, विग सरप्राइज ।
यति सानो उमेर शिवमको यति ठुलो सोच । युवा उद्योगीका लागि त्यसकारण प्रेरणाको स्रोत । विदेशी लगानीका वारेमा शिवमको गुनासो, हामी वैदेशिक लगानी ल्याउने त भन्छौ, सरकारको प्रयास स्वागतयोग्य हो, तर खोइ त नीतिगत समस्या सल्टाउन खोजिएको ? हो, यसमा हामीलाई सकस निकै भइरहेको छ । पाँच करोडको अफडिआई गर्न कति नीतिगत अप्ठारो छ ।
सप्ताहान्तको रूपमा साथीहरूसँग उनको जमघटमा यी सबै विषयमा गफ पनि हुने गर्छन् । खासमा यो जमघटमै व्यापारिक विषयमा छलफल । शाकाहारी भोजन र गुलियो पदार्थबाट टाढा, उनका अन्य विशेषता हुन् ।
१४, १५ वर्ष अघिदेखि उनको परिवारले ‘ मस्कुलर डिस्ट्रोफी’ हुनेलाई सहयोग गरिरहेका छ । यो सन् २००३ देखिको संस्था हो । यसमा आबद्ध करुणा पोख्रेल र र चिकित्सक रोहित पोख्रेल । प्रो.डा. जेपी अग्रवाल प्रतिष्ठानले यो सञ्चालन गरेको छ ।
व्यापारको क्रममा नेपालका धेरै पहाडी क्षेत्रमा उनी पुगेका छन् । त्यसो त उनी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा पनि मूल सहर भन्दा अन्यत्र साना ठाउँमा गएर त्यहाँको जीवन बुझ्न चाहने उनको चाहना हो । नेपालको हकमा पनौती, अरुण क्षेत्र र सोलुखुम्बु जस्ता ठाउँमा पुगेकै छन् । यस कारण सामान्य नेपाली जीवनका बारे जानकारी पनि छ । साँचो भन्दा सिङ्गो नेपाली जीवनलाई बुझेका छन् । त्यसो त उनी आफै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा बिल लेख्ने काम गर्थे । यसबाट विश्वास जित्दै प्रमुख कार्यकारी सम्म भएका हुन् ।
उनका अबका चाहना प्रस्ट छन्, व्यापारलाई फराकिलो बनाउने, सामाजिक क्षेत्रमा केही सहयोग गर्ने । ठगी र झुट जस्ता शब्द उनको शब्दकोशमा छदैछैन । अनि एउटा नयाँ चाहना पनि छ, युवा व्यवसायीको ऐकवद्धता । कुनै व्यक्तिसँग योजना छ, मिहिनेत गर्ने हिम्मत छ र जाँगर छ भने सामान्य १ लाख या ५० हजार रुपैयाँले रोकिनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न समेत तत्पर हुने छन्, उनी । सवैलाई यही आग्रह गर्छन् पनि ।
युवा उद्यमी शिवम